...Olona folo kosa no velona ka misy amin’izy ireo no maratra mbola tsaboina eny amin’ny hopitaly. Ny valo tamin’ireo maty dia olona nandeha namonjy ireo niharam-boina", hoy i Rasolofonirina Roland, tale misahanany fifamoivozana an-dranomasina eo anivon’ny ministeran’ny Fitaterana.
"Tamin’ny 12 ora antoandro ny alahady no tokony niala tany Sainte Marie, ny ministra Nadine Ramaroson sy ireo niara-dia taminy. 10 minitra nialoha ny fiaingana anefa dia mbola nitafa tamin’ny fikambanan’ny vehivavy izy. Nilaza taminy izahay fa 10 minitra ihany no tokony hifampiresahan’izy ireo. Tsy niainga anefa ilay sambo raha tsy tamin’ny 2 ora mahery tolakandro", hoy ny fitantaran’ny mpikarakara ny Festival Tsolabe, tamin’ny fahitalavitra tsy miankina iray.
Natsangana ny komity manokana misahana ny famotorana ity raharaha ity, omaly izay misy ministera maro. "Hijery ny antony marina naha-tonga ny loza no tena nananganana io komity io. Eo ihany koa anefa ny tokony hanatsarana ny fifamoivoizanna an-drano-masina", hoy ihany ity tompon’andraikitra ity.